Ọnụahịa nke Xiaomi Mi 9 asịrị | Gam akporosis
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Mobiles, Xiaomi
N'oge na-adịghị anya, anyị zutere Mbido ọzọ nke Xiaomi, Mi 9. A smartphone nke dị nnọọ ịtụnanya maka ihe niile ọ na-ewetara anyị. Ike, imewe na ịdị mma. Ihe Xiaomi enwetalarị site na iji ọtụtụ ngwaọrụ ọhụụ. Mana anyị na-efu obere obere ma dị mkpa, Gịnị ga-akwụ ụgwọ ya?
Dị ka ọ bụ omenala, ekele maka ọhụụ ọhụrụ, anyị nwere ike ịmata ọnụahịa nke mbido Xiaomi ọzọ ga-erute na Spain. Ihe ọhụrụ Xiaomi Mi 9 ga-abụ dị ọnụ karịa atụmanya. Mana ọ bụ ezie na na mbụ ọ dị ka ọnụahịa ahụ ga - abụ naanị nkwado, na njedebe ọ gaghị adị. Ozi oma.
Xiaomi Mi 9 maka euro 449
Ọ dị ka a nzuzu ọnụahịa na-ahụ uru nke ohuru Xiaomi ohuru gha enwe. Mara na ị ga-enwe mgbawa Snapdragon 855, ihe di egwu Igwefoto foto lens atọ, nakwa na ọ ga-enwe 6 GB nke Ram na 64 GB nke nchekwa. Anyị nwere ike ịtụ anya ọnụahịa dị elu karịa. Nke bụ eziokwu bụ na ụnyaahụ e nwere okwu na ọnụahịa a ga-abụrịrị nkwado maka nkwụnye ụgwọ 1.000 mbụ, nke anyị chere na ọ ga-abụ.
Taa, anyị nwere ike gosi na edozi ego. Mana ugbu a, Xiami na-ekwupụta ya dị ka ọnụahịa mmalite ya. Nke ahụ bụ, anyị nwere ike ijide ya Xiaomi Mi 9 mbipute 6GB + 64GB na-acha anụnụ anụnụ, nwa ma ọ bụ odo odo na agba, maka gosiri price nke 449 euro. Ma kpachara anya, ọnweghị oke maka ndoputa, ozi magburu onwe ya maka ndị niile nwere ụdị ahụ.
Site na ndudue nke ebe nrụọrụ weebụ bipụtara ebe anyị nwere ike ịme ndoputa ekwentị, anyị nwere ike ịmata ọnụahịa ya otu ụbọchị tupu. Na megide ihe leaked taa anyị mụtara na nke a bụ ụgwọ ọrụ ya, ọ bụghị ego nkwado. Ọ dịkwa mma ịmara na site taa, ị nwere ike idobe ndoputa.
Ya mere ma ọ bụrụ na Xiaomi Mi 9 bụ ama ị chọrọ Site na nkọwa ya ị doro anya na ị ga-aga maka ya, ị nwere ike ịtọ usoro ahụ. Ihe dị mma bụ na ha ga-amalite ịdị na-adị site na Tọzdee na-esote abalị iri abụọ na asatọ nke ọnwa a. Youkwesighi ịbụ otu n'ime ndị mbụ, ma na-ahụ nkọwa ya na ọnụahịa ya, n'ezie akụkụ mbụ ga-eresị efe efe
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Pricegwọ nke Xiaomi Mi 9 asịrị
Oppo T1, flagship dị ọnụ na Snapdragon 855 na-abịa